Vaovao - Inona no fantatrao momba ny fenitra fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fanontana boky ho an'ny ankizy?
Ny tsenan'ny fanontam-pirintin'ny ankizy any Shina dia nanjary nambinina kokoa satria ny ray aman-dreny dia mandinika bebe kokoa ny famakiana ary mihamaro ny ray aman-dreny mifantoka amin'ny famakiana. Isaky ny mampiroborobo ny fivarotana an-tserasera dia mahatalanjona foana ny angon-drakitra fivarotana an'ny bokin-jaza. Mandritra izany fotoana izany, ny fitakian'ny ray aman-dreny amin'ny fanontana ny bokin-jaza dia mitombo ihany koa miaraka amin'ny takiana amin'ny atiny, indrindra ny fiarovana sy ny fiarovana ny tontolo iainana ny fanontana ny bokin'ny ankizy. Fikambanan'ny mpanonta maro no nanomboka nanamarika ny bokin-taratasy ho an'ny ankizy toy ny "publication vita pirinty maintso" sy "pirinty amin'ny ranomainty soja".
Inona no fantatrao momba ny fenitra fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fanontana boky ho an'ny ankizy matihanina? Ity lahatsoratra ity dia ny fahalalana mifandraika atolotry ny SmartFortune amin'ity olana ity. Mety ho matihanina ny voambolana, fa ny olana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ao amin'ny bokin'ny ankizy dia olana isan'andro izay tsy maintsy atrehin'ireo ray aman-dreny mikarakara ny zanany. Manantena aho fa izany dia mety hanaitra ny soatoavin'ny tsirairay
Ny olan'ny fiarovana ny tontolo iainana ao amin'ny bokin'ny ankizy dia olana isan'andro izay tsy maintsy atrehin'ireo ray aman-dreny rehetra mikarakara ny zanany
Betsaka ny ray aman-dreny izao no mandinika tsara ny fambolena fahazarana mamaky teny ny ankizy, ka hanomana fitaovana vita pirinty isan-karazany toy ny karatra, boky ary boky ho an'ny zanany izy ireo. Na izany aza, raha tsy mitandrina na tsy miraharaha ny kalitaon'ny vokatra vita pirinty ianao rehefa misafidy ireo vokatra vita pirinty ireo ho an'ny zanakao, dia mety hiteraka vokatra hafa vita pirinty misy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalaman'ny ankizy.
Ka inona ny karazana pirinty inona no hitondra vokany ratsy? Andao hiresaka momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny fiarovana ny tontolo iainana ny zavatra vita pirinty sy ny kalitaon'ny zavatra vita pirinty dia tsy tokony hafangaro. Ny kalitaon'ny zavatra vita pirinty dia manondro ny fanoratana sy ny tsipika mazava ary ny fananganana ny loko marina. Ny fiarovana ny tontolo iainana ny zavatra vita pirinty dia midika fa ny mpamaky dia tsy mitondra loza ara-pahasalamana ho an'ny mpamaky rehefa mamaky amin'ny zavatra vita an-tsoratra.
Ny fanamarihana manokana ny bokin-jaza dia satria ny zaza dia mihinana zavatra manimba amin'ny zavatra vita pirinty rehefa mamaky. Voalohany, satria ny ankizy, indrindra ny tanora, dia mety manana fahazarana mamiravira sy manaikitra boky rehefa mamaky; faharoa, vokatra mamaky ankizy maro no manana sary miloko marobe, ary ny habetsaky ny ranomainty ampiasaina dia mihoatra ny lahatsoratra mahazatra. Manana boky maro ny Tompo. Noho izany, ny bokin-jaza dia tokony hanana fenitra ambony amin'ny fiarovana ny tontolo iainana noho ny boky mahazatra.
Amin'io lafiny io dia azontsika atao ny mamakafaka ny fitaovana lehibe hamakian'ny ankizy ny zavatra vita pirinty: taratasy, ranomainty, lakaoly ary sarimihetsika.
Ny ranomainty dia mety misy benzena, indrindra ny inksitra miloko. Solvents toy ny benzene no ampiasaina. Rehefa vita pirinty ilay boky vaovao dia tsy miova tanteraka ny solvent, ary hamoaka fofona tsy mahafinaritra ny mpamaky aorian'ny fanokafana ilay fonosana. Benzene sy toluene dia rano misy fofona mahery ary manapoizina izaitsizy. Tsy vitan'ny hoe manimba ny lalan-pisefoana izy ireo, fa miteraka fanapoizinana mahery vaika sy fivontosan'ny rafi-pitatitra foibe. Ny fofonaina vetivety dia mety hahatonga ny olona ho sadaikatra sy maloiloy. Ny fihenan'ny fotoana maharitra dia mety hanimba ny tsokan-taolana ary hiteraka leukopenia sy trombositopenia. Ary ny anemia aplastika sns.
Loharanom-pofona manitra hafa koa ny lakaoly ampiasaina amin'ny famehezana. Ny ankamaroan'ny lakaoly amin'ny famatorana boky dia mampiasa maso mangatsiaka haingana. Ity akora simika miovaova ity matetika dia manjavona afaka 10 ka hatramin'ny 20 andro. Na izany aza, nasiana tombo-kase anaty kitapo fonosana ilay boky ary tsy azo esorina ny fofona, noho izany dia mbola hanana fofona hafahafa ihany ny mpamaky rehefa avy eo am-pelatanany Ho fanampin'izany, ny taratasy sy adhesives ambany kalitao dia misy formaldehyde be dia be, izay mamoaka fofona mahery. Ny fiaretana maharitra amin'ny zavatra simika toy izany dia manimba ny fahasalamana ary misy fiatraikany lehibe amin'ny fivelaran'ny zaza.
Ankoatr'izay, satria tsy mitovy amin'ny an'ny olon-dehibe ny fahazaran'ny boky ny ankizy, ny metaly mavesatra izay mety ho ao anaty ranomainty sy taratasy tsy misy kalitao, toy ny firaka, dia hiditra amin'ny vatan'olombelona amin'ny alàlan'ny tanana sy ny vavan'ilay zaza ary hisy fiantraikany amin'ny vatan'ilay zaza. Eto dia tokony hampahatsiahivina ny ray aman-dreny fa mba hampihenana ny vidin'ny boky piraty dia matetika ny taratasy ambany, ranomainty ary lakaoly no ampiasaina. Ny tatitra momba ny fanandramana matotra dia mampiseho fa ny boky piraty sasany dia misy mitarika 100 heny mihoatra ny boky tany am-boalohany. , Rehefa mividy boky ho an'ny ankizy dia tandremo manokana ny famantarana ireo boky piraty.
Ho an'ny boky tena izy, ny fenitra fiarovana ny tontolo iainana dia tsy maintsy raisina ihany koa mba hamerana ny atin'ny singa manimba amin'ny zavatra vita pirinty.
Tamin'ny 14 septambra 2010 dia nanao sonia ny "Fampiharana ny fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny paikady fanontana maitso" ny fitondrana jeneraly teo aloha an'ny gazety sy ny famoahana ary ny minisiteran'ny fiarovana ny tontolo iainana ", mifantoka amin'ny fifehezana henjana ny residues vy mavesatra sy ny fandotoana organika miovaova amin'ny lafiny telo: taratasy, ranomainty sy adhesive miempo mafana.
Tamin'ny 8 Oktobra 2011, ny Sampan-draharahan'ny Jeneraly misahana ny asa fanaovan-gazety sy ny famoahana ary ny minisiteran'ny fiarovana ny tontolo iainana dia niara-namoaka ny "Fanambarana momba ny fampiharana ny fanontana maintso" izay nanazava ny ideolojia mitarika, ny velarana ary ny tanjona, ny fandaminana sy ny fitantanana, ny fenitra fanontana maitso, ny maitso fanamarinana fanontana, ary fandaminana asa amin'ny fampiharana ny fanontana maitso. Ary ny fanohanana ny fepetra fiarovana, sns., Dia nanao fametrahana feno mba hampiroboroboana ny fampiharana ny fanontana maintso.
Tamin'ny 6 aprily 2012, ny General Administration of Press and Publication dia namoaka ny "Notice on the Implementation of Green Print of Textbooks in Primary and Secondary School", izay nilaza fa ny boky fampianarana ambaratonga voalohany sy faharoa dia tsy maintsy ataon'ny orinasa mpanonta izay nahazo maintso. fanontana fanamarinana vokatra vita amin'ny mari-pahaizana momba ny tontolo iainana. Ny tanjon'ny asa dia ny manomboka amin'ny tapaky ny fararanon'ny taona 2012, ny isan'ireo boky fianarana ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa vita pirinty ampiasaina amin'ny toerana maro dia tokony hahitana 30% amin'ny totalin'ny fampiasana ny boky fampianarana ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa eo an-toerana; tamin'ny 2014, nanambara ny Sampan-draharahan'ny Fitantanana ny fanontam-pirintin'ny State Administration of News, Radio, Film ary Televiziona fa ny boky fianarana ho an'ny ambaratonga voalohany sy faharoa dia ho tanteraka amin'ny ankapobeny ny fandrakofana pirinty maintso.
"Ny fepetra ara-teknika momba ny vokatra momba ny laboara momba ny tontolo iainana amin'ny fidirana fanontam-pirinty offset" dia azo ampiharina amin'ny fidirana fanonta offset hafa ankoatry ny inks manasitrana taratra. Izy io dia manondro ny fenitry ny mari-pamaritana ny tontolo iainana any Japon, Aostralia, Korea atsimo, Nouvelle Zélande ary firenena hafa, ary mandinika tanteraka ny satan'ny teknika sy ny vokatra vokarin'ny mpanamboatra ranomainty fanonerana ny fireneko. Miorina amin'ny toetra mampiavaka ny tontolo iainana. Ny fepetra fanaraha-maso ireo solvents benzena, metaly mavesatra, fitambarana miovaova, fifangaroan'ny hidrokarôma manitra, ary menaka legioma ao amin'ny fidirana fanonta offset. Mandritra izany fotoana izany dia misy ny lalàna mifehy ny fampiasana azo antoka ny vokatra, amin'ny fampiasana mahomby sy ny fitehirizana loharanon-karena, ary ny fampihenana ny famokarana sy ny fampiasana ny takela-pirinty offset. Ary ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny olombelona amin'ny fizotran'ny fanariana, fanatsarana ny kalitaon'ny tontolo iainana, ary fampiroboroboana ny famokarana sy ny fampiasana ireo vokatra tsy misy poizina, miovaova.
Ary hijerena raha ranomainty tontolo iainana ny ranomainty, ary raha hisy akony ratsy eo amin'ny mpanoratra izany dia heverinay indrindra ireto hevitra roa ireto: Voalohany, metaly mavesatra. Noho ny fahazaran'ny ankizy boky, metaly mavesatra ao anaty ranomainty no azo tsofina avy amin'ny vava. Ny faharoa dia raharaha miovaova. Anisan'ireo solvents sy additives ampiasaina amin'ny ranomainty, misy hydrocarbons, alcohols, esters, ether, ketones sns sns, ho etona izy ireo rehefa maina ny ranomainty ary miditra amin'ny rafi-pisefanan'ny mpamaky.
Ka inona avy ireo karazana inkipa mpinamana tontolo iainana?
1. Ranomainty bran
Ny teknolojia ranomainty dia avy tany Japon. Amin'izao fotoana izao, andrim-panjakana sy orinasa maro ao Shina no manao fikarohana momba izany. Ny tena antony lehibe dia satria i Sina sy i Japon dia firenena fihinana vary lehibe sy firenena mpamokatra. Ny volom-bary novokarina nandritra ny fizotran'ny tanimbary dia tsy nampiasaina ho sakafom-biby ihany. Tsy nampihatra ny tombam-bidiny farany ambony izy io, ary ny fampivoarana ny teknolojia fitrandrahana solika avy amin'ny vary ary ny fahombiazan'ny teknolojia ny menaky ny tanimbary amin'ny ranomainty dia tsy vitan'ny hoe nampitombo ny sandan'ny vary, fa nanatsara ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ny fanontam-pirinty .
Ny tombony lehibe amin'ny ranomainty bran dia ny: ranomainty VOC (Vondron-javatra voajanahary miovaova, fangaro organika miovaova) residu, fivezivezena ambany, loto maloto amin'ny tontolo iainana; Mora apetraka amin'ny toerana misy azy ny loharanom-bary, mifanaraka amin'ny fepetra nasionaly ao amin'ny fireneko; ranomainty bran ranom manana gloss avo, amin'ny pirinty Misy vitsivitsy residues manimba sy fiarovana avo.
2. Ranomainty avy amin'ny soja
Mihena na nanjavona ireo hydrocarbons misy menaka mineraly ao anaty ranomainty ary tsy azo ihodivirana ny fitaoman'ny VOC. Noho izany, misy inksika miorina amin'ny menaka soja izay ampahany amin'ny menaka mineraly no soloina menaka soja. Rehefa avy nodiovina kely ny menaka soja dia afangaro amin'ny additives toy ny pigment sy résins. Ny ranomainty soja koa dia manana tombony maro: fanoherana ny rangotra, tsy misy fofona mahasosotra, fanoherana ny hazavana sy ny hafanana, mora amboarina, maro loko sns ... Ho fanampin'ny menaka soja dia azo ampiasaina ihany koa ny menaka legioma hafa, toy ny menaka rongony.
3. Ranomainty miorina amin'ny rano
Ny ranomainty miorina amin'ny rano dia tsy misy solvents organika miovaova, ary mila soloina rano fotsiny amin'ny fanontana. Noho izany, ny ranomainty miorina amin'ny rano dia mampihena be ny famoahana VOC ary manalavitra ny fandotoana ireo fitambaran'ny organika miovaova. Mandritra izany fotoana izany dia mampihena be ireo singa mampidi-doza sisa tavela eo ambonin'ny vokatra vita pirinty, ary iray amin'ireo karazana ranomainty izay mahafeno ny fenitra fiarovana ny tontolo iainana maitso. Ho fanampin'izany, ny fampiharana ny ranomainty miorina amin'ny rano dia mety hampihena ny loza ateraky ny afo ateraky ny herinaratra mijanona sy ny solvents mora mirehitra, ary hampihena ny fofona solvent residual ambonin'ireo zavatra vita pirinty. Noho izany, ny fampiharana ny ranomainty miorina amin'ny rano amin'ny fonosana sakafo, ny fonosana kilalao ho an'ny ankizy, ny fonosana paraky sy ny alikaola dia nanjary fahita matetika.
Ary farany, andao hiresaka ny fizotran'ny laminaty. Ny laminating dia dingana famaranana ho an'ny haingon-trano ambonin'ny vokatra vita pirinty, ary be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fanontana sy ny fonosana. Na izany aza, maro ny dingam-panaronana no mbola mampiasa teknolojia fanosotra, izay mitondra fahavoazana lehibe ho an'ny tontolo iainantsika sy ny vatantsika. Solvents maro an'isa misy benzena no ampiasaina amin'ny fizotrany, ary ny benzena dia karsinogen mahery. Noho izany, eo amin'ny fiainantsika dia misy vokatra pirinty sy fonosana marobe izay mifangaro amin'ny teknolojia fandrakofana eo no ho eo, toy ny fonosana boky mirakitra boky sy boky hafa, izay tena manimba, indrindra ny ankizy. Araka ny tatitry ny fikarohana nataon'ny National Cancer Society of America, ireo ankizy tratry ny vokatra misy benzena nandritra ny fotoana ela dia tena mety hijaly amin'ny rà toy ny leukemia. Noho izany, ny boky ho an'ny ankizy dia tsy tokony hampiasa araka izay azo atao ny fanaovana ny sary.
SmartFortune dia tena mahay mamokatra boky, miorina amin'ny fanontam-pirinty avo lenta ny orinasa, taona vitsivitsy izay ankoatra ny boaty fonosana sy harona taratasy, mifantoka amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana boky fanabeazana ho an'ny ankizy, boky baoritra, nifikitra tamin'ny fenitra avo lenta ho an'ny mahafeno sy mihoatra ny takian'ny mpanjifa.